Silisiôma Info. About. What's This?
Ny silisiôma dia zavatra simika voasokajy aminny vatovelona. Ny evany dia Si ary ny isa atômikany dia 14. Zavatra anisanny betsaka indrindra ny silisiôma eo aorian ny ôksizenina. Tsy misy amin ny toetrany malalaka izy fa orina: roanôksidana silisiôma SiO 2, silisy na silikaty hafa Ny teny hoe silisiôma dia avy amin ny teny frantsay hoe silicium, izay avy amin ny teny latina hoe silex, silicis midika "vato" na "vatoafo".
Ny alimo dia metaly maro taharo vokatry ny fanatsonihana miaraka ny varahina amin ny metaly hafa. Amin ny heviny tery kokoa dia iantsoana ny fanakambanana ny varahina sy ny firapotsy ny hoe "alimo". Amin ny ankapobeny dia ny 54 %n ny taharon ny alimo dia varahina ary ny sisa dia mety ho firapotsy na alominiôma, firamainty, beriliôma, manganezy ary tongstena, ary mety hahitana koa silisiôma sy fôsfôro, ny fanitso ihany no tsy atao be. Mananana toetra mampiavaka azy ny alimo, dia izy ela tonta, tsy moramora laninan ny asidra sady afaka mampita aratra tsara. Ampiasaina matetika hanaovana fita ...
Ny Volana dia volanny Tany. Ny Volana dia satelita natoraly ngeza indrindra eo aminny rafitry ny masoandro. Ny halaviranny tany aminny volana dia misy 384.403 km. Ny teny malagasy hoe volana dia avy aminny fiteny aostronezianina jereo ny teny malay Bulan Aminizao fotoana izao, ny Volana ihany no satelita nandehananny olona sy notsidihinny olona ary nodiavinny olona. Luna I, zanabolana rosiana, no zanabolana voalohany nihodinkodina manodindina ny Volana taminny taona 1959, taminio taona io ihany koa dia nipetraka teo aminny Volana ny sambondanitra Luna 2, fa potika ilay saondy teo am-pidina ...
Ny mpanitsy, na mpanitsy zitina dia olikaratra mamadika ny zitina miherina ho zitina mikararana. Ny fiantsoana izany zavatra izany dia fanitsian-jitina. Ny fitaovana ilaina aminizany dia roalahiny ary mpampita tapany vita silisiôma. Ahitana mpanitsy avokoa ireo zavatra fampiasa mandavanandro toa ny radiô, ary ny solosaina. Ny fitaovana mamadika zitina mikararana ho zitina miherina dia antsoina hoe mpamadika aminny teny anglisy inverter.